Boqortooyada VAN LANG (2879 BC - 258 BC, 2621 sano) - Dhulka Barakaysan ee Daraasaadka Vietnam
Boqortooyada VAN LANG (2879 BC - 258 BC, 2621 sano)
P. HUARD1 & M. DURAND2
Once gaaraya Phong Châu, kontonka wiil ee U Cơ3 waxay doorteen walaalkood ka weyn boqorkooda Boqortooyada Hùng.
Tkoofiyad ayaa ugu horeysay boqorka Hùng yaa xukumay Văn Lang, boqortooyadii ugu horeysay ee Vietnam. Ku Văn Lang, oo leh xuduudo aan caddaysnayn oo ka soo fiday Vietnam si ay u Wabiga buluuga ah4, waa mid aan hore loo aqoon Juqraafiyada Shiinaha. Halkaas, HENRI MASPERO5 ayaa ku qiyaastay in Văn Lang of taariikhyahanada Vietnam, waa uun boqortooyadii hore ee Idinku-lang (Dạ Lang), oo ku taal Koonfurta Harada Tong-T'ing kaas oo magacu si xun u akhriyay oo si khaldan dib loogu duubay Taariikhyahanada Shiinaha ee Tang kuwaas oo u gudbiyay ay, qalad in ay asxaabta Vietnam. Xaqiiqdii, dabeecada aad (D) waxaa si qalad ah dib loogu soo ceshan lahaa Wen (Văn) waana taas sababta keentay in jahwareer uu dhexmaro Ye-Lang iyo Wen-Lang. Waxaa jiray, qaab magdhow, a Văn Lang oo ku yaal Koonfurta, qaybta septentrional ee maanta Vientian Central; miyay taasi noqon lahayd Văn-Lang taas oo qorayaashu ku wareereen Idinku-lang oo waxay moodeen in labadan boqortooyo mid uun isku mid yahay.
VLn Lang, marka hore boqortooyada Vietnam, waa inuu qabsaday dhul aad uga xaddidan kan Xiis Quỷ. Liiska Degmooyinka guud ahaan laga bixiyo taariikho iyo halyeeyo kala duwan kuma jiraan wax dhul ah oo la xiriira Harada Tong-T'ing6. Laba iyo tobanka degmo ma dhaafaan Kouang-si iyo Kouang-tong waqooyiga.
The Văn Lang lahaa jiritaan aad u dheer. Il ayaa la isugu gudbiyay inta udhaxeysa Boqorrada Hùng laga soo bilaabo waqtigii halyeeyga ilaa 257 dhalashadii Ciise ka hor, taariikhda ay ku darsatay by Mid Daran7, amiir Pa-Chou (Ba Thuc).
Tmacluumaadka aan ku soo ururin karno Văn Lang ururada siyaasadeed iyo nolosha bulshada ayaa laga soosaaray Qoraallada Shiinaha, ma ahan hore 4th qarnigii aan joognay, kana soo Qoraallada Vietnamese dhawaanahan14th qarnigii) laakiin gudbinta xaqiiqooyin aad u qadiim ah iyo caqiidooyin.
Tisaga oo aan ku habboonayn sameynta sawir-gacmeedka nolosha boqortooyadan wuxuu ku nool yahay dhibaatada si loo hagaajiyo xilliga, ama xitaa qaybta qarniyaal ee ay ku ansax noqon karto. Ku Boqortooyada Hùng waxay u badan tahay inuu xukumay ku dhowaad kun sano, haddii aan qirno celcelis ahaan konton sano xukun kasta; halka aragtida kooban ee ku saabsan Nolosha Văn Lang waxay ku jiraan qoraallo kooban oo firidhsan iyo tiro halyeeyo ah oo daraasad xasaasi ah ay ka bilaabatay HENRY MASPERO. 18-kii Boqorrada Hùng dhaqan ahaan ayaa lagu tiriyaa, waxaan aad u yar nahay saxda saxda ah ee taariikhda iyo taariikhda.
Any generalau waxaa ku jiri doona dariiqyo, loo aanayn karo, tusaale ahaan, sanadkii 1000 BC, ama 300 BC. Intaa waxaa dheer, in badan oo ka mid ah astaamahaas waxaa laga yaabaa inay ka tirsanaan doonaan xilliyadii hore Boqortooyada Văn Lang waxaana laga yaabaa in loo soo gudbiyey iyada qorayaasha Vietnam ee 14th iyo 15th qarniyo.
The Boqortooyada Văn-Lang, haddii qofku rumeysan yahay qoraallada, wuxuu ahaa dowlad gacan-ka-hadal ah, si habeysan loo abaabulay laakiin aan baahsaneyn. Waxaa la hoos geeyay xaraashka a Huun (xaraash badan) ama (Lạc) Boqor kaasoo asal ahaan loogu doortay geesinimadiisa iyo geesinimadiisa. Taasi marka hore Hùng boqorka xukumay at Phong Châu8, meel ku taal maanta-maanta Bạch Hạc. Wuxuu ahaa curadkii Lạc Long Quân, awoowgii Boqol Yuun (Việt) yacni maanta Vietnamese, oo sidoo kale ahaa ilaaliyaha genie ee boqortooyadii ugu horeysay ee Vietnam. Midka koowaad Hùng boqorka u qaybiyey Văn Lang soohdimaha degmooyinku u aaminaan walaalihiis oo laga yaabo inay yihiin Lạc Marquis (Lạc Hầu ama madaxda rayidka).
Tdegmooyinka tuubada lafteeda ayaa loo qaybiyay qoraallo loo wakiishay boqorka walaalihiis ama shakhsiyaad ka tirsan qoyska boqortooyada (Lạc Tướng Ama taliyayaasha ciidamada). Gobollo ay daganaayeen Sayidyadan oo kale ayaa loogu yeeri jiray Lạc Điền.
Pshaqooyinka udubka sida boqorka, marquis, jeneraalo (ama ugaasyo) waxaad moodaa in laga dhaxlay. Wiilasha boqorka ayaa lahaa cinwaanka Quan-Lang kuwii dhedigana waa loo yeedhay Mệ Nàng or Mỵ Nương9. Dadku waxay isbarbar dhigeen ururkaas siyaasadeed iyo nidaamka feudal-ka oo wali ka jira liinta xilligan ee degmooyinka gobollada dhexe iyo sare ee Waqooyiga Fiyatnaam, gaar ahaan, Mường10 taas oo weli leh kala sarreyn madax-dhaqameedyo been-abuur ah, oo dhexdooda ka mideysan silsilado fasiraadnimo iyo gobannimo. Dadka degan Văn Lang gaadhay heer ilbaxnimo gaar ah. Dhaxlay farsamooyinka ay Xiis Quỷ awoowayaashood, iyagu waa hagaajiyeen oo xitaa waxay ikhtiraaceen kuwo cusub. Waxay ahaayeen dad beeraley ah oo dhulka u nadiifiya dabka, hoesna u falaan. Ka dib waxay u yimaadeen inay ku tababbaraan jarista iyo gubida doogga; waxay beerteen oo ay goosteen bariis dhegdheg ah oo aan jilicsaneyn (Eeg halyeeyga Bánh Chưng). Iyagu, markii ugu horreysay waxay ku kariyeen bariiskooda tuubooyin bamboo ah, ka dib waxay u yimaadeen inay isticmaalaan dheryaha dhoobada ah iyo dhoobada birta ah. Waxay ka ogaayeen naxaas. Waxay kaloo ahaayeen kalluumeysato iyo badmaax. Waxay ku xardheen kuna sawireen jidhkooda sawirro dawacooyin ah (yaxaasyada ama yaxaasyada), abeesooyinka iyo xayawaanada kale ee biyaha ku jira si ay isugu hubiyaan ilaalin sixir ah oo ka dhan ah xayawaankaas oo ay ka baqeen weerarada Ujeeddo isku mid ah, waxay ku jiiteen doonyahooda iyo maraakiibtooda madaxyo badan iyo indhoolo xayawaanno biyo ah. Dharkooda asal ahaan waxaa lagu sameeyay fiilooyinka dhirta. Waxay kaloo tolli jireen dermo. Guryahooda waxaa lagu dhisay meelo dhaadheer si looga fogaado dhammaan weerarada suurtagalka ah ee xayawaanka duurjoogta ah. Way dhaleen, sida ay qaarkood u sheegeen Qoraallada Shiinaha, timo dhaadheer oo ku yaal chignon oo cimaamado ku hayeen. Sida ku cad halyeeyada reer Vietnam qaarkood waxay lahaayeen, taa lidkeed, timo gaagaaban si ay “u fududee socodkooda hawdka buuraha“. Waxay ka faa'iideysteen is-nuts iyo betel. Madoobaadka ilkaha ayaan si cad loogu muujinin halyeeyga betel iyo geedka areca-nul ama halyeeyga Cao (CauQoyska, laakiin aqoonyahanno badan oo reer Vietnam ah ayaa dib ugu celiya xilligii hore. Waxay ahaadeen inay ahaayeen cibaado wadayaal waxayna kudhaqmeen allabaryo bini aadam oo socday ilaa 10th qarniga aan joogno, iyo dhaqamada noocan oo kale ah ayaa lagu xakamayn lahaa King Đinh Tiên Hoàng11. Guurka dhexdooda ah wuxuu umuuqday inuu ahaa mid si cadaalad ah xor u ahaa waxaana lagu fuliyay xilliyada ku habboon. Betel iyo areca-nuts ayaa door weyn ka ciyaaray arooska. Cibaadooyinka guurka waxay ka koobnaayeen allabaryo iyo diyaafad ka hor dhammaystirkeedii.
If qofku wuxuu aaminsan yahay halyeeyada Vietnam, inta lagu gudajiray xukunka Boqorrada Hùng waxaana laga yaabaa dhammaadkii boqortooyadooda, xiriirro aan toos ahayn in lala aasaasay West ama si fudud si fudud ula Badaha Koonfurta. The Halyeeyga Qaraha Biyaha waxay umuuqataa inay markhaati ka tahay imaatinka Vietnam ajaanibta ka soo jeeda jinsiyad kale oo soo dejin lahayd miraha, tanina waxay u badan tahay dhinaca badda (3rd qarnigii BC.).
1: PIERRE HUARD (16 October 1901, Bosnia - 28 Abriil 1983) wuxuu ahaa dhakhtar Faransiis ah (dhakhtar qalliin iyo anatomist), taariikhyahan ku takhasusay cilmiga daawada iyo cilmu-nafsiga, muddo dheerna joogay Indochina, hormuudka kulliyado badan oo daawo ah (Hanoï, Paris), Raktarka Jaamacadda Félix Houphouët-Boigny, hormood ka ah taariikhda daawada. (Eeg dhammaan faahfaahinta: P. HUARD)
2: MAURICE DURAND wuxuu ahaa luuqad yaqaan Faransiis-Fiitnaamiis ah wuxuuna ku dhashay Hanoi. (Eeg dhammaan faahfaahinta: M. DURAND)
3: ÂU CƠ (嫗 姬) wuxuu ahaa, sida ku cad quraafka abuurista ee Dadka Fiyatnaamiiska, cirfiid buur aan dhiman karin oo guursaday Lạc Long Quân ("Dragon Eebaha Lac“), Oo waxay sidday kiish ukumo ah oo dillaacay boqol carruur ah oo si wadajir ah loo yaqaan Bach Việt, awowayaashiin in ay Dadka Fiyatnaamiiska. (Eeg dhammaan faahfaahinta: ƠU CƠ)
4: Wabiga buluug: hab Webiga Yangtze, mararka qaarkood loo yaqaan sida Wabiga buluug ilaha ingiriisiga ee hore. Ku Yangtze or Yangzi (English: / ˈJæŋtsi / ama / ˈjɑːŋtsi /) waa webiga ugu dheer (6,300 km # 3,900 mi) Asia, kan saddexaad ee ugu dheer adduunka iyo kan ugu dheer adduunka oo gebi ahaanba ku qulqulaya hal waddan. Waxay ka kacdaa at Jari Hill ee Buuraha Tanggula (Tibetan Plateau) wuxuuna marayaa 6,300 km (3,900 mi) jihada guud ahaan dhanka bariga dhanka Badda Shiinaha. Waa webiga lixaad ee ugu weyn adduunka marka laga soo tago dareeraha.
5: HENRI PAUL Gaston MASPERO (15/12/1883, Paris - 17/3/1945, Xerada uruurinta ee Buchenwald, Naasiyiintii Jarmalka) wuxuu ahaa aqoonyahan Faransiis cilmiga sayniska iyo borofisar wax ku darsaday mowduucyo kala duwan oo la xiriira Bariga Aasiya. (Eeg dhammaan faahfaahinta: HENRI PAUL GASTON MASPERO) (Eeg faahfaahinta oo dhan: HENRI MASPERO)
6: Harada Tong-T'ing or Harada Dongting (Shiino: 庭 湖) waa haro weyn, oo gacmo-gaab ah waqooyi-bari Gobolka Hunan, Shiinaha.
7: AN DƯƠNG VƯƠNG wuxuu ahaa boqorka iyo kan kaliya ee xukuma boqortooyada ạu Lạc, dowlad dhaqameed qadiim ah oo xudun u ahayd Red River Delta. Isagoo ah hogaamiyaha Qabiilooyinka Âu Việt, kii ugu dambeeyay ayuu ka adkaaday Hùng boqorka oo ka mid ah gobolka Văn Lang oo mideysay dadkeeda - oo loo yaqaan Lạc Việt - dadkiisa ah Ệu Việt. Dương Vương wuu cararay oo uu isdilay dagaalka kadib Ciidamada Nanyue sanadkii 179 BCE. (Eeg dhammaan faahfaahinta: LOOGU TALAGALAY)
8: Phong Châu (峯 州, Degmada Bạch Hạc, Việt Trì, Gobolka Phú Thọ maanta) ahaa magaalada caasimada ah ee Văn Lang (hadda Vietnam Nam) inta badan Mudada Hồng Bàng,1 ka Boqortooyadii Saddexaad si ay u Sideed iyo Toban Daynti of Boqorrada Hùng.
9: Mỵ Nương (Shiinaha: 媚 娘 ama 媚 嬝) waa cinwaan la isticmaalay intii lagu jiray Muddadii Hong Bang in loo tixraaco gabadha Boqorrada Hung. (Eeg dhammaan faahfaahinta: MỴ NƯƠNG)
10: The Mường (Fiyatnaamiis: Người Mường) ama Mwai yihiin qowmiyad u dhalatay waqooyiga Vietnam. The Muong waa dalka seddexaad ee ugu weyn 53 koox ee laga tirada badan yahay, waxaana lagu qiyaasaa tirada dadka ku nool 1.45 milyan (sida ku xusan tirakoobka 2019). The Muong dadka deggan gobolka buuraleyda ah waqooyiga Vietnam, ku urursan Gobolka Hòa Bình iyo degmooyinka buuralayda ah Gobolka Thanh Hóa. Waxay aad ugu dhowyihiin qowmiyadda Fiyatnaamiis (Kiin). (Eeg dhammaan faahfaahinta: MƯỜNG)
11: ĐINH BỘ LĨNH (924-979) (r. 968-979), oo markii hore la magacaabay Hinh Hogaan (丁 桓 1), ayaa ugu horreeyay Imbaraadoorkii Fiitnaam ka dib markii laga xoreeyay dalka xukunkii Boqortooyada Shiinaha Han Han, iyo sidoo kale aasaasihii muddada gaaban Dinh Dynasty waana shaqsi si weyn uga dhex muuqday aasaaskii Xornimada Vietnamese iyo midnimo siyaasadeed qarnigii 10aad. (Eeg dhammaan faahfaahinta: INH TIÊN HOÀNG)
Urces Ilo wareedyo: Connaissance du Vietnam - P. HUARD. Hanoi, 1954.
◊ Sawir: wikipedia.com.
◊ Cinwaanka cinwaanka, xigashooyinka, farta waaweyn, geesinimada leh, qoraallada farta ku qoran, muuqaalka sepia ee muuqaalka ah waxaa dejiyay Ban Tu Thư - thanhdiavietnamhoc.com
(Booqday jeer 244, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 479
← Beesha XINH MUN ee 54 qowmiyadeed ee Vietnam
Comments Off ee BETEL iyo TARAAXDA ARECA
LUNAR FARSAMADA CUSUB EE FARSAMO (Bandhig Faneed)
Comments Off on LUNAR FARSAMADA SANADKA CUSUB (Bandhigga weyn)
Comments Off on SA DEC - Cochinchina
TAARIIKHII GUUD EE VIETNAMESE Qorista - Qaybta 5
Comments Off on TAARIIKH kooban oo ah QORAALKA VIETNAMESE - Qaybta 5
LUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiis iyo Shisheeye… (4,508)
LUQADA VIETNAMESE ee Fiyatnaamiis iyo Shisheeye… (3,496)
Beesha CHUT oo ka kooban 54 qowmiyadood oo Vietnam ah (2,612)
TAARIIKHII GUUD EE VIETNAMESE Qorista - Qaybta 2 (2,438)
Jaaliyada LA HA ee 54 qowmiyadood oo Vietnam ah
Comments Off Beesha LA HA ee ka kooban 54 qowmiyadood oo Vietnam ah
U aadida XAALADAHA TẾT - Qaybta 2
Comments Off Socda Tagida Xusuusta TẾT - Qaybta 2
Beesha CO TU ee 54 qowmiyadeed ee Fiyatnaam
Comments Off Beesha CO TU Community oo ka kooban 54 qowmiyadood oo Vietnam ah
Booqashada Maanta: 180
Booqashooyinka Maalmihii 7 ee ugu dambeeyay: 3,101
Guud ahaan Wadarta: 285,996